Lova, Kaelle, Hanta…maty vonon’ny vadiny !
Tsy vao izao fa efa hatramin’izay no manangan-tsandry amin’ny vadiny ny lehilahy rehefa misy tsy fifankahazoana ao an-tokantrano. Iharan’izany saika isan’andro izy efatra mirahavavy nitafatafa tamin’ny Jejoo anio : Lova, Kaelle, Hanta. Araho anie e!
fohy izany no hanamafisan'izy ireo ny hafatra efa navoakan'ny tomponandraikitra rehetra, indrindra ny filoham-pirenena fa tsy tokony hivoaka ny trano ny tsirairay. Tokony hanasa tanana matetika ary ahay hiray hina ka hitandro ny tenany mba hiarovana ny hafa. Ankoatra ireo, nanamafy ny laharana tokony ho antsoina i Melvin, raha misy fanazavana tiana ho azo mahakasika ny tsimokaretina na efa misy ireo famantarana fa mitondra io tsimokaretina io. Namoaka horonan-tsary hafa moa ny coach Dupuis ka ao anatin'izany no hanoroany ireo zavatra azon'ny tsirairay atao mba hanalana andro ao an-trano toy ny fianarana teny hafa ankoatran'izay efa hay. Izy manokana dia mianatra miteny gasy. Manoro ihany koa izy fa azo atao tsara ny miara-manao fihetseham-batana amin'ny vady aman-janaka, miara-milalao sy ny sisa mba ahafinaritra ny fotoana fihibohana.